Varimi vakarasikirwa nezvirimwa zvavo nekuda kwekudirwa mvura kwevhu vachabatsirwa muKhabarovsk Territory - "Potato System" magazini
kuru nhau Nhau dzedunhu
в nhau, Nhau dzedunhu
Hurumende yeKhabarovsk Territory ichapa rubatsiro kuvarimi avo, nekuda kwekuvharwa kwemvura kwevhu, vakasara vasina goho. Hutongi hwechimbichimbi hwakaunzwa mudunhu reKhabarovsk nedunhu reLazo. Iyo nyaya yemubhadharo wekukuvara ikozvino yagadziriswa. Kubata musoro wedunhu Mikhail Degtyarev akataura izvi panguva yekuenda kumabhizimusi ezvekurima, inotaura portal "Gubernia".
Chikamu chetatu chezvirimwa muKhabarovsk Territory chinowira mudunhu reLazo, asi kwemakore akati wandei akateedzana, varimi havana kukwanisa kurima zvirimwa zvavo. Mvura iri kuuraya chibage, soya, bhari, oats, gorosi uye mbatatisi. Pane imwe nguva minda yakaramba yakaoma nekuda kwekudzosa system yakavakwa pakati pezana ramakore rapfuura. Iye zvino 80% yezvivakwa zvakasakara zvakanyanya.
"Tine chete mudunhu reLazo, matinoshandira nhasi, kubva pamazana gumi nematanhatu emahekita, ayo akambodhonzwa nekuda kwekudzoreredzwa kwakaunzwa munguva dzeSoviet, nhasi kune mahekita asingasvike zviuru zvitanhatu," akadaro Mikhail Degtyarev.
Bazi rezvekurima reRegional gore rega rinoverenga kukanganisika kwakagashirwa nevarimi vekurima nekuda kwekudirwa mvura kwevhu. Nguva imwe neimwe bhiri rinoenda kumakumi emamirioni emaburu. Izvo zvinorasikirwa zvinopihwa mari neyekuchengetedza homwe yehurumende yeKhabarovsk Territory.
“Isu takatoona kare kukuvara, huwandu. Tinofunga kukanganisika kwemakore mashanu, uye zvino zvazoitika mudunhu reLazo - vakatambura kwemamiriyoni makumi maviri nerimwe, ”akadaro mukuru webazi rezvekurima mudunhu, Alexander Shkurin.
Hurumende yedunhu ine chokwadi chekuti muripo wechigarire wekukuvara haisiyo nzira yekubuda nemamiriro aya. Ikozvino, pachinzvimbo cheActioning Gavhuna, chirongwa chiri kuvandudzwa kudzoreredza modzo dzesystem uye kuvaka zvivakwa zvitsva. Dunhu iri rinoronga kugamuchira mari yeizvi zvichishayisa mari zvirongwa zvemubatanidzwa.
Tags: kudzokororaKhabarovsk Territory